Waa maxay xarunta waxbarashada joogtada ah? | Sameynta iyo daraasadaha
Maite Nicuesa | 20/11/2021 23:48 | Tababar
Waa maxay xarunta waxbarashada joogtada ah maxayse tahay shaqadeeda? Bulshadu way isbedeshaa waxayna ku horumartaa xawli wayn. Sidaa awgeed, isbeddelkani wuxuu sidoo kale abuurayaa baahiyo cusub oo suuqa shaqada ah sida ay caddaynayso kor u kaca tiknoolajiyada. Sidaa darteed, baahida loo qabo xirfado cusub ayaa soo baxa. Dhanka kale, shaqaalaha oo dhan waxay dejin karaan yoolal horumarineed oo shaqo oo cusub kuwaas oo si toos ah ugu xidhan waxbarashada. Tababarka joogtada ah wuxuu qof walba u noqdaa caqabad joogto ah.
Sidaa darteed, kani waa waddo aad ku milicsan karto xilliga ugu dambeeya ee sanadka si aad isugu dheellitirto guulaha la gaaray. Iyo, dhanka kale, waxaad sidoo kale qeexi kartaa qaraarada soo socda ee la xiriira qaab dhismeedka helitaanka karti iyo xirfado cusub 2022. waxbarashada joogtada ahSida fikradda lafteedu ay tilmaamayso, waxay muujinaysaa ujeedo lagama maarmaan ah. Quudinta xiriirka aqoonta ee marxaladaha kala duwan ee jiritaanka.
1 Xarumaha si kor loogu qaado fursadaha siman
2 Cusbooneysii resume oo hagaaji warqadda daboolka
Xarumaha si kor loogu qaado fursadaha siman
Waxaa jira xarumo tababar oo kala duwan kuwaas oo ka kooban xirfadlayaal u raacaya ardayda habka hagaajintooda qaab shakhsi ahaaneed. Meelaha la socda xoojinta waxbarashada nolosha oo dhan waxaa loogu talagalay dadka waaweyn ee raba inay horumariyaan oo ay horumariyaan xirfaddooda. Tan darteed, waxay rabaan inay furaan albaabo cusub iyada oo loo marayo ballaarinta aqoonta. Koorasyo ​​khaas ah ayaa la baraa si kor loogu qaado heerka shaqaalaysiinta ardayda. Shahaadooyinku waxay kuu oggolaanayaan inaad ballaariso manhajka, sidaas darteed, warqadda daboolka si aad u codsato shaqooyin cusub.
Waxaa jira xirfadlayaal badan oo qaangaarnimada raba in ay gaaraan yoolal ay ka tageen oo la sugayo waayihii hore sababo jira awgood. Kuwo kale waxay ku jiraan waqti ay u baahan yihiin inay dib u soo nooleeyaan xirfadooda si ay u ogaadaan fursado cusub. Xilliga hadda jira, dhab ahaantii, waxaa calaamad u ah hubaal la'aan iyo dareen xasillooni darro. Waa in la tilmaamaa in helitaanka tababarka aasaasiga ah ay fure u tahay horumarinta fursadaha siman ee suuqa shaqada. Sida aad si fiican u ogtahay, shuruudaha habka xulashada waxay noqon karaan kuwo aad u baahan. Waadna awoodaa si taxadar leh u akhri shuruudaha si aad u codsato musharax ahaan boos shaqo. Tababarku waa mid ka mid ah shuruudaha loo isticmaalo in lagu xusho profile leh sifooyinka la doonayo si loo fuliyo shaqada ay dalbato shirkadu.
Nolosha xirfadeed ee bini'aadamka waxay ku xirnaan kartaa khibrad waxbarasho. Tababarka aasaasiga ahi waa albaab furaya waddo waxbarasho oo u horseedi karta ujeedooyin kale oo khuseeya. Tusaale ahaan, shahaado sare qaado. Xarumaha tababarka joogtada ah waa meelo gaar ah oo ay ku jiraan koox cilmi-nafsiyeedyo badan. Barashada tignoolajiyada cusub aad ayay muhiim ugu tahay bulshada maanta jirta, runtii, intarneetka iyo aaladaha dhijitaalka ah ayaa lama huraan u ah shaqo raadinta. Sababtan awgeed, xarumaha la sheegay waxay meel u baneeyaan arrintan.
Cusbooneysii resume oo hagaaji warqadda daboolka
Waa maxay xarun waxbarasho oo sii socota maxayse muhiim u tahay? Waa meel bannaan oo fursado cusub oo dhiirigelinaysa hal-abuurnimada oo hurisa xiisaha. Deegaan taageero si loo gaaro yoolalka cusub ee goobta xirfadeed. Macallimiintu waxay baraan koorsooyin khaas ah oo ku jira qaabka tababarka dadka waaweyn. Xarumaha waxbarashada joogtada ah kaliya ma bixiyaan aqoon-is-weydaarsiyo fool-ka-fool ah. Bixinta khadka tooska ah waxay bixisaa dabacsanaanta lagama maarmaanka u ah ardayda si ay ugu balaariyaan diyaargarowga iyaga oo isticmaalaya gurigooda.
Waa maxay faa'iidooyinka ay bixiyaan qorshayaasha qayb ka ah xarumaha maanta la xusay? Waxay siiyaan ilo tayo leh dadka doonaya inay cusbooneysiiyaan resumeygooda. Tababar sidoo kale kaaba dhabbihii hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Noticias » Tababar » Waa maxay xarunta waxbarashada joogtada ah?